Ny torolàlana ho an'ireo olon-kendry telo: fihomehezana mahatsikaiky ho an'ny mpamorona sary | Famoronana an-tserasera
Ny torolàlana ho an'ireo olon-kendry telo: fihomehezana mahatsikaiky ho an'ny mpamorona sary
Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra hampivelarana ny asa kalitao dia ny fananana fampahalalana fohy. Amin'izany dia hametraka amin'ny endrika fahatsiarovana ny tanjaka sy ny fahalemen'ny mpanjifanay izahay ary miorina amin'izany dia hamolavola drafitra stratejika hahatratra ny tanjonay izahay ary hihaona amin'ny filàna amin'ny alàlan'ny asanay. Na izany aza, izy io koa dia iray amin'ireo dingana manahirana indrindra amin'ny drafitry ny asan'ny mpamolavola, na satria tsy azo atao ny miditra amin'ny fampahalalana sasany na mivantana noho ny tsy fisian'ny predisposition an'ny mpanjifa. Ao anatin'izany dia ilaina ny mametraka fifandraisana akaiky amin'ny mpanelanelana amintsika mba hahitana loharanom-pahalalana stratejika mifanaraka amin'ny tranga resahina. Ny marina dia misy ny mpanjifa izay hita fa manahirana kokoa noho ny hafa ary misy koa ny fanamby izay lasa sarotra kokoa sy manentana kokoa noho ny hafa. Na izany na tsy izany na ny olana na fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra aza dia azo ahena ho tantara an-tsary tsotra sy mahatsikaiky izay manampy antsika hivoatra ary maninona no tsy tadidintsika amin'ny vazivazy ny fianarantsika.
Ahoana raha tsy maintsy nanao fampahalalana fohy momba ireo Mpanjaka telo isika? Karazana paikady inona no azonao anampiana azy ireo hifaninana amin'i Dadabe Noely? Amin'ity fiarahabana Krismasy an'ity komity ity Doka fanaovana dokambarotra dia namaly ity fanontaniana sarotra sy mahatsikaiky ity. Avy eo avelako miaraka amin'ny lahatsariny ianao ary avy amin'ny Creativos Online dia maniry izahay ho fanombohan'ny taona. Andao hanomboka ny taona amin'ny hery lehibe, maniry ny hamorona ary ambonin'izany rehetra endrika be dia be izany! Mandrapihaona amin'ny taona ho avy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny torolàlana ho an'ireo olon-kendry telo: fihomehezana mahatsikaiky ho an'ny mpamorona sary
Avy amin'ny Workana Studio izahay dia miarahaba ireo mpamorona rehetra izay manao an'io karazana asa io!
Sipa komika izay tsy hain'ny mpamorona sary fotsiny